राजेश विद्रोही बुधबार रातोपाटीको विचार र दृष्टिकोणमा प्रकाशित विजय ज्ञवालीको लेख ‘मधेसमा मडारिन थालेको कालो बादल’ पढ्न पाइयो । सराहना छ उहाँलाई, भोलिका दिनमा पनि यस्तै विचारहरूको प्रस्तुत उहाँको हातबाट भइरहोस् । जसले सय दिनमा निर्माण हुने समाजिक सद्भाव यस्ता विचारले एक छिनमै बिगार्ने छन् । बन्दुकको गोलीको रूपमा काम गर्नेछ र वारप..
निर्वाचन : ५ वर्षे ३४,८८८ पदाधिकारीको चयन
अग्नि चौलागाईं लामो समय जनप्रतिनिधिविहीनका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरु आगामी वैशाख ३१ को निर..
यी हुन् स्थानीय निर्वाचनमा युवाका चुनौती
सीमा गिरी देश स्थानीय तहको चुनावमा होमिएको छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै राजनीतिक..
–चम्फासिंह भण्डारी पृष्ठभूमि : स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही ..
प्रचण्डले किन गर्न सकेनन् यी काम ?
–निमकान्त पाण्डे आमूल रूपान्तरण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर सुरु ग..
विजय ज्ञवाली अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको भारत भ्रमण गर्ने उचित समय थिएन । देशमा अस्थिरताका लागि विभिन्न दलले यति कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । यसको समाधान नगरी भारत जानुको खासै अर्थ थिएन । तर यो अस्थिरताको दोष राष्ट्रपतिलाई दिन त मिल्दैन । तैपनि राष्ट्रपति जस्तो देशको गरिमामय पदमा आसीन व्याक्तित्वको अहिले आन्तरिक समस्यामा केन्..
बालकृष्ण ढुङ्गेल प्रकरण : उज्जनले मात्र न्याय पाउने, थिरबहादुरको कसले सुन्ने ?
निश्चल दाहाल माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुङ्गेलको विषयले अहिले निकै चर्चा पइरहेको छ । यो विषयको केन्द्र ओखलढुङ्गा भए पनि उनका पक्ष–विपक्षमा तर्क नेपालभरि हुँदै आएको छ । यस विषयलाई छिट्टै सम्बोधन नगरे झनै जटिल हुँदै जाने छ । राजनीतिप्रति चासो राख्ने जोकोही दिग्गजले यसलाई खेलाँची रुपले हेर्नु हुँदैन । साथै अतिर..
निर्वाचनमा हाम्रो हैन, राम्रो रोजौँ
बीबी श्रेष्ठ करिब १९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावले समग्र देश नै तताइरहेको बेला गाउँगाउँमा आकाङ्क्षीहरुले उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन् । यो लोकतन्त्रको मूल मर्मअनुसार नै जनताद्वारा अनुमोदित हुने र स्थानीय स्तरमा नै आफ्नो निपुणता क्षमताको बलमा समाज र राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । लामो समयको..
अक्सिजनसँगै जहर निल्दैछन् राजधानीवासी
केदारनाथ नेपाल (निश्चल) वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा प्रतिलाख ३६ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ । विभिन्न स्रोतहरुले पनि नेपालको राजधानी ‘काठमाडौँ’लाई एसियाको पहिलो र विश्वको तेस्रो प्रदूषित सहर भनेर पुष्टि गरेका छन् । धुवाँधुलोले देशको झण्डै एक तिहाइ जनसङ्या रहेको काठमाडौँलाई प्रदूषित मात्र बनाएको छै..
डा. ऋषिराज बराल “बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु” भनेर अदालतले सरकारलाई दिएको निर्देशनको सन्दर्भलाई लिएर अहिले सञ्चार माध्यमहरू तथा सामाजिक सञ्जालहरू रङ्गीचङ्गी भएका छन् । कतिले यसप्रति खुसी जाहेर गरेका छन् र कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । कतिपयले यो प्रकरणलाई लिएर माओवादीलाई बदनाम गर्ने र आक्रोस पोख्ने माध्यम पनि बना..
माओवादी–राप्रपा मुद्दाका पोषक काङ्ग्रेस–एमाले
शिवशरण ज्ञवाली मुलुक स्थानीय चुनावको सँघारमा उभिएको छ । विभिन्न दलले आआफ्ना राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेका छन् । यसको मुख्य अग्रपङ्क्तिमा अग्रगामी पार्टी भनिएको माओवादी केन्द्र र पश्चगामी भनिएको राप्रपा रहेका छन् । उनीहरुका मुद्दा नै स्थानीय चुनावका मुख्य मुद्दा बन्न पुगेका छन् भने त्यसको पक्षपोषकका रुपमा काङ्ग्रस र एमाले छन् । क्ष..
धर्मनिरपेक्षता र धर्म परिवर्तनका कारणहरू
सञ्जय ज्ञवाली हिन्दू धर्म संसारको सबैभन्दा पुरानो धर्म हो । यो धर्म कुनै व्यक्तिको उपदेश, विचार आदिका आधारमा विकसित भएको धर्म होइन । जसरी क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट, स्लामिकलगायत अन्य धर्मको विकास भयो । हिन्दू धर्म सनातन धर्म हो । जसको अवलम्बन मानव विकासको क्रममा भारत वर्षमा सुरु भएको मानिन्छ । नेपाल अहिले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको ध..
नगेन्द्र चाम्लिङ आउँदो वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विविध अर्थले आयामिक मान्न सक्छौं । गणतन्त्र आएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन, स्थानीय निकायको नामाङ्कन र सीमाङ्कनको हेरफेर भएको छ । स्थानीय स्वयत्तता, नेतृत्वमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गलगायतलाई अनिवार्य निर्वाचित हुने अवसर पनि छ । स्वास्थ्य, पिउने पानी, विद्या..
राष्ट्रपतिलाई पूर्वराजाले सम्मान गर्दाको अवस्था
–निमकान्त पाण्डे– २ सय ४० वर्षसम्म शासन गरेका नेपालका शाहवंशीय राजाहरूको शासनकाललाई राजनीतिक शब्दमा सामन्तवादी शासन व्यवस्था भनेर बुझ्ने गरिन्छ । राजसंस्था यथार्थमा देशीय सामन्तवादको प्रतीक मानिन्छ । वर्तमान परिवर्तित राजनीतिमा राजसंस्थाले कुनै स्थान नलिएको अवस्था छ । यसर्थ पूर्वराजा नागरिकमा रूपान्तरित पनि भइसकेको मान्न सकिन्छ ..
यस्ता नेता छानौँ स्थानीय निर्वाचनमा
मनहरि तिमिल्सिना नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रको स्थापनापछि पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ मा हुँदैछ । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै स्थानीय तहमा दलीय सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । अखबारका पानादेखि जनताको दैलोसम्म नगरपालिका र गाउँपालिकाका सम्भावित मेयरहरुको चर्चा सुरु हुन थालेको छ । यो निर्वाचन बहुमत प्राप्त मेयर, उपमेयर छान्..
माओवादी आन्दोलनमा विस्तारित रोग
डा. ऋषिराज बराल नेपालको माओवादी आन्दोलनभित्र यतिबेला सङ्गठन, नेता, कार्यकर्ता, पदोन्नति, योग्यता, क्षमताका साथै क्षेत्रीयतावाद, व्यक्तिवाद, गुटवाद, नातावाद तथा कृपावादका सन्दर्भहरू चर्चाको विषय बनेका छन् । क्रान्तिसम्बन्धी गम्भीर बहस ओझेलमा परेको र व्यक्तिवादी–अवसरवादी प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको छ । आजको अवस्थामा कुन समूहले के गर..
लोपोन्मुख काङ्ग्रेसको नाक
प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफ्नै नाक जोगाउन केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकको विशेष र महत्वपूर्ण एजेण्डा नै नेका पार्टीको १३ औँ महाधिवेसनपछि हराएको नाकको खोजी गर्नु रहेको देखिन्छ । २००७ सालको ऐतिहासिक क्रान्ति सम्पन्न गरेको पार्टी, जननायक बी.पी. कोइराला, लौहपुरुष पार्टीका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, ..
स्थानीय निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारका चुनौती
सीमा गिरी महिलाहरुको प्रमुख चुनौती भनेको नै आवश्यकता र क्षमताबीचको चुनौती हो । ती दुई पक्षको चुनौतीको समाधान गर्नु हरेक महिलाले गर्नुपर्छ । समयअनुसार महिला नेता कार्यकर्ताले आफ्नो क्षमताको विकास गर्न आवश्यक छ । यसका साथै समयअनुसार आफूलाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि जरुरी छ । नेपाली समाज अझै सामन्ती र प्रितृसत्तत्मक सोचले ग्रस..
छुवाछूत अन्त्यका लागि दलहरुको भूमिका
प्रमिला बानियाँ घर नजिकैको काकाको छोराको उपनयन, त्यसमा मलाई पनि आमन्त्रित गरिएको थियो । अफिसको काम सकेर जानुपर्दा अरुभन्दा म ढिलै पुगेकी थिएँ । चार वर्षको मेरो छोरो मसँगै थियो । घरभन्दा ५० मिटर दूरीमा खानाको व्यवस्था गरिएको रहेछ । खाना खाने ठाउँमा अपुग भएमा थप्ने र काम गर्नेबाहेक खासै कोही थिएनन् । छोरा र […]
विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक
नुमनाथ पौडेल कुनै समयमा राजनीतिलाई समाजसेवा गर्ने एक सशक्त र स्वायत्त माध्यम मानिन्थ्यो । बिस्तारै समाजसेवा र राजनीतिको दूरी बढ्न थाल्यो । व्यक्तिगत प्रगतिको उद्देश्य र राजनीतिको उद्देश्यमा समीप्यता र समानता आउन थाल्यो । समाज सेवाका लागि गैरसरकारी संस्था चाहिन्छन् भन्ने सोच र विचारले कार्वान्वयनको धरातल पहिल्याउन थाल्यो । बिस्ता..
जुना घर्ती मगर आधा आकास ढाकेका महिलाहरु कुनै समयमा चुलो चौकोमा सीमित थिए । यो देशमा भएको राजनीतिक परितर्वनले उनीहरुको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । कुनै समयमा पुरुषको आदेशमा चल्ने महिला अहिले आफैमा मेहनत गरेर स्वरोजगार बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समयमा रोजगारको सिलसिलामा युवाहरु विदेशिने क्रम बढेको छ । यसले सामाजिक र आर्थिक [&hel..
निमकान्त पाण्डे नेपाल वास्तवमै गज्जब शासन भएको बन्न पुगेको छ । यो देशका व्यापारीलाई, यो देशका नेतालाई विदेशका पत्रिकाहरूले अर्बपति र उत्कृष्ट भनेर उपाधि दिएपछि त्यसको वास्तविकतातर्फ न त नेपाल सरकार न नेपाली सञ्चारमाध्यम न नेपालको अन्य कुनै निकायले नै वास्तविकताको खोजी गर्न आवश्यक ठान्दछ । बेलायतको चर्चित म्यागेजीन ब्याङकरले नेपा..
युवालाई स्थानीय निर्वाचन अवसर
केदारनाथ नेपाल (निश्चल) स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मुलुकभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ । दलहरु तीव्र रुपमा निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन् । संविधान संशोधनबिना निर्वाचनमा भाग नलिने भनिरहेको मधेसी मोर्चा चुनाव बिथोल्ने मनस्थितिमा अझै पनि रहेको देखिन्छ । मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्ने बताइरहँदा मधेसका स्थानीय ठाउँमा निर्वाचनको..
चुनावी आशा र विकेन्द्रीकृत सोच
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ देश निर्वाचनमय बनेको छ । एउटा त्यही लहर जहाँ चुनावी माहोलमा नेताजीहरू भोटका निम्ति हात जोड्नुहुन्थ्यो । जितेर पदमा पुगेपछि जनताले माग र समस्या बोकेर नेताजीका ढोकामा लामै समय धाउनुपथ्र्यो । जनतामा परिवर्तनको आशा जागेको छ । उम्मेद्वार छनोट, मतदाता बहस अनि पार्टीका चुनावी प्रचारसँगै आआफ्ना दलीय समस्या र एजेन्ड..
विजय ज्ञवाली विश्व विख्यात समाजसेवी मदर टेरेसाको एउटा मूलमन्त्र आज पनि उत्तिकै मननीय छ । उनले भनेकी छिन्– “तिमी सफलताका लागि कति काम गर्छौ यो महत्वपूर्ण कुरा हुँदैहोइन, तिमी आफ्नो कामलाई कति प्रेमपूर्वक गर्छौ यही नै सफलताको मापदण्ड हो ।” उनको यही मूलमन्त्र र कर्मले गर्दा नै उनलाई विश्व विख्यात परिचित गराउन सफल भयो । […]